Umkhiqizi Ophambili We-Heading Die neFektri | Toonney
Ukusetshenziswa endaweni ebandayo yesihloko sokufa kungenye yezicelo eziyinhloko ze-tungsten carbide material. Isihloko sokufa ngokuvamile singahlukaniswa nge-punching die ne-bushing die, esisetshenziswe esihlokweni esibandayo, isihloko esifudumele, nasendaweni yesimo sobuchwepheshe esishisayo. Isitshalo sensimbi esimelana ne-Toonney sisebenza ngensimbi esezingeni eliphakeme yokugqwala enokuqina kokugqoka okuhle. Isitshalo sensimbi esimelana nokugqwala kweToonney sidume ngesihloko saso esibandayo esithi die and stamping die ngenani lefektri. Kungani isitshalo sensimbi esimelana nokugqwala kweToonney sinikela ngentengo ephansi kumakhasimende? Ngoba isitshalo sensimbi esimelana nokugqwala kweToonney sithola ukusekelwa okuningi kumakhasimende angaphambilini nakuhulumeni wasekhaya. Uyemukelwa esitshalweni sensimbi esimelana ne-Toonney ukuthola eminye imininingwane mayelana nokushaya isitembu nokufa okubandayo.
Isingeniso se-Heading Die
Isihloko esibandayo ubuchwepheshe benqubo obenza ukuguqulwa komsebenzi kusebenze nesimo esiseduze nomkhiqizo oqediwe ngezinga elikhulu kakhulu ezinqubweni ezimbalwa. Kuyisisekelo sezimboni zemishini yesimanje nezimoto. Ifektri ebandayo kaToonney ifa ifektri ikhiqiza izihloko ezahlukahlukene ezibandakanya ukudweba okufayo, ukubanda okubandayo kuyafa, ukucacisa kuyafa, ukufa kwe-carbide, ukugoba okufayo nokuqinisa ukwenziwa. Ngenxa kahulumeni osekela amaphoyisa, iToonney ebandayo ebheka ukuthi ifektri inganikela ngentengo eshibhile ebandayo ebhalwe phansi ethi die and stamping die.
Umkhiqizi wokufa we-Toonney usethole ukuthandwa kakhulu ekhaya naphesheya. Ngoba umakhi we-Toonney stamping die unolwazi olunothile lokukhiqiza i-stamping die. Ithimba lokuklama lomkhiqizi wokufa wokunyathela weToonney liqembu eliqeqeshiwe ngempela elisezingeni lomhlaba jikelele. Njengomkhiqizi wokufa wezitembu odumile wasendaweni, umkhiqizi wokufa we-Toonney uthola ukusekelwa okuvela kuhulumeni. Ngakho-ke umkhiqizi wokufa kukaToonney anganikela ngentengo enhle futhi.
Ngaphansi kwezimo zokusebenza ezinamandla okugqoka, i-tungsten carbide ebandayo ebangwayo iyafa iyadingeka ingxubevange enzima inomthelela omuhle wokuqina, ukuqina kokuqina, amandla okukhathala, amandla we-flexural, kanye nokumelana okuhle kokugqoka.
1. Imvamisa isetshenziswa ku-cobalt ephezulu namamaki ayi-alloy amagebhugebhu.
2. Ukuqina kokuqina kweCarbide, ubudlelwano bokuqina phakathi kwalezi zinto zombili ziyaphikisana: ukwenza ngcono ukumelana nokugqoka kuzoholela ekwehleni kobulukhuni, futhi kuthuthukise ukuqina nokugqoka ukumelana ngokungenakugwenywa kuholele ekunciphiseni. Ngakho-ke, ukukhethwa kwamamaki we-alloy, isidingo sokusebenza ngokuhambisana nento nokucubungula izimo ukuhlangabezana nezidingo ezithile.
3. Uma amamaki akhethiwe asetshenziswayo, athambekele ekuqhekekeni nasekulimaleni kusenesikhathi, kufanele asebenzise ibanga lokuqina eliphakeme; uma ibanga elikhethiwe lisetshenziswa ukugqoka nokulimala kwangaphambi kwesikhathi, kufanele lisebenzise ukuqina okuphezulu, ukugqoka ukumelana namamaki angcono. UToonney unamamaki angezansi wezitembu zezinketho zokufa.
Ibanga Ubuningi Ubulukhuni TRS Impact force ukumelana
I-RVA90 13.39 82.5 2350 0.9
I-RVA95 13.1 81.5 2150 0.96
Izindaba Zezibonelo:I-Cold heading die and stamping die engatholakala kuhlu lwethu olujwayelekile olujwayelekile, inganikezwa njengamasampula mahhala. Kwabathile ababandayo ababhekene nesihloko nokufa izitembu ngamakhasimende akhethekile akhethekile adingekayo, kuzokhokhiswa. Vele, amakhasimende adinga ukukhokha imali yokuthumela. Imvamisa, isikhathi sokuhola samasampuli sizoba zingakapheli izinsuku eziyi-7 zokusebenza
Ubuncane be-oda Ubuningi:Abukho ubuncane be-oda obuncane bokufa okubandayo nokufa kwesitampu kwe-oda lokuqala lokulingwa. Kepha ku-oda lesibili, inani eliphelele lezihloko ezibandayo zokufa noma zokugaya izitimela akufanele libe ngaphansi kwe-1000 USD.
Ukucaciswa kwe-Heading Die
Ibanga Ubuningi Ubulukhuni Ubulukhuni TRS Amandla okucindezela I-KIC
(g / cm³) (HRA) (HV) MPA I-GPA MPA.m1 / 2
I-GA10 14.40 92.0 1865 3600 5.9 14
I-RVA70 14.05 86.5 1076 3200 3.6 23
I-RVA65 13.73 85.0 900 3000 3.4 24
I-RVA80 13.58 84.0 832 2740 3.3 25
I-RVA90 13.39 82.5 756 2350 3 27
I-RVA95 13.10 81.5 709 2100 2.8 28
I-KC12 14.31 85.8 972 2740 3.7 18
I-KC13 14.22 85.0 900 2740 3.6 20
I-KC18 13.73 83.5 806 2740 3.3 22
I-GA40 14.40 89.0 1400 3000 4.1 17
I-GA50 14.20 88.5 1323 3100 4 19
I-GA55 13.85 85.5 933 3000 3.7 21
I-GA60 13.65 84.5 865 2900 3.6 24
Ifektri ebandayo kaToonney nayo ingamukela imikhiqizo eyenziwe ngendlela oyifisayo ye-tungsten.
Isici Sesihloko Sokufa
Igama lomkhiqizo: Isihloko esibandayo die / stamping die
Inombolo imodeli: CHD / SD
Uhlobo: Isihloko esibandayo die / stamping die
Izinto: Izinto ze-Tungsten carbide
Ukubekezelelana Njengoba kudingeka.
Ibanga: I-GA10, RKG2, RKG3, RKG4, RKG5, RKG6, RVA70, RVA65, RVA80, RVA90, RVA95, RST6, RST7, RST8, GW70, KC12, KC13, KC18, A40, GA50, GA55, GA60, GA60
Usayizi: Njengoba kudingeka
Inkokhelo imigomo: UFOB Xiamen, TT
Ukusetshenziswa kwe-Heading Die
I-GA10, i-RKG2, i-RKG3, i-RKG4 (Ubuningi nobulukhuni njengoba kukhonjisiwe etafuleni elingenhla)
Ukufaneleka kwesihloko kuyafa njengeBube drawing die, powder shaping die, nut ne-bolt die
I-RKG5, i-RKG6 (Ubuningi nobulukhuni njengoba kukhonjisiwe etafuleni elingenhla) ye-scissor die, i-powder ukwakha i-die, i-nut ne-bolt die.
I-RVA70 (Ngobuningi be-14.02, i-harness 85HRA) isetshenziselwa ngokukhethekile ukudweba isikhunta esiqinile sokubopha isikulufa namantongomane
I-RVA65 (Ngobuningi be-13.73, ubulukhuni 85HRA) nge-dia encane. umshudo uyafa, isihloko esibandayo siyafa
I-RVA80 (Ngobuningi be-13.58, ubulukhuni 84HRA) nge-dia enkulu. umshudo ufe, inati iyafa, isihloko esibandayo siyafa
I-RVA90 (Ngobuningi be-13.39, ubulukhuni 82.5HRA) ingeyesikhunta sekhanda lokuma kwekhanda, i-nut die, i-die stamping die
RVA95 (Nge ukuminyana 13.10, ubulukhuni 81.5HRA) iwukuba nut die, imbali emise isikulufa die, hot extruding die, super esindayo nginyathela die
I-RST6 (Ngobuningi be-13.70, ubulukhuni 85.8HRA) isetshenziswe ku-stainless steel screw screw.
I-RST7 (Ngobuningi be-13.40, ubulukhuni 85HRA) isetshenziselwe insimbi engagqwali isikulufa, umthelela wokuqina wokumelana nokufa, isikulufa sife.
I-RST8 (Ngobuningi be-13.30, ubulukhuni be-84HRA) isetshenziselwe ukuphakanyiswa kwekhanda lesikulufa, umthelela wokumelana nokuqina wokumelana, ifreyimu ephindwe kabili yomumo wokufa, isikulufa, i-rivet die.
I-KC18 (Ngobuningi be-13.73, ubulukhuni 83.5HRA) isetshenziselwe isikulufa sokushaya isitampu
Sicela uxhumane nabathengisi nganoma yimiphi imibuzo ekukhetheni amamaki wezinto ezibonakalayo.
Inzuzo Yesihloko Sokufa
Ukunyathela kwe-Toonney kufa ifektri kulawula ikhwalithi ngokuqinile, kunamadivayisi wokuhlola afana ne-HV, i-HRA test, i-TRS tester, i-Carbon sulfur analyzer kanye ne-microscope ephezulu yokukhulisa i-metallurgical ukuhlola izici zomzimba nezamakhemikhali we-tungsten carbide material. Futhi idivayisi eqondile yobukhulu ukulawula ukubekezelelana komumo.
Toonney nginyathela die nomkhiqizi uneminyaka engaphezu kwengu-10 ukukhiqizwa isipiliyoni nginyathela die futhi abandayo elibangise die.
I-Toonney ingenisa imishini esezingeni eliphakeme futhi ithuthukise iqembu labo lobungcweti lokuklama nokukhiqiza isihloko esibandayo sokufa nesokunyathela.
Ifektri ebandayo kaToonney inganikeza isithembiso sokuthi konke okunyathela okufayo nokubanda okubandayo kuzoba nokuhlolwa ngesikhathi sokukhiqiza kanye nokuhlolwa kokugcina ngemuva kokukhiqiza.
Toonney wokushaya kufa umkhiqizi angamukela i-oda elenziwe ngokwezifiso lokunyathela okufayo nokubanda okubandayo.
Langaphambilini Ukudweba Die